Social Feed EduLink Australia
About Australia Society EduLink Australia All Types Link Photo Video Gif Event Note EduLink Australia
EDULINK နှင့် Australia နိုင်ငံ Griffith University မှ ပူးပေါင်းကျင်းပသော “Careers in Engineers” ဆွေးနွေးပွဲကြီး
နေ့ ရက်-	ဇွန်လ၊ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၇ (ကြာသပတေးနေ့ )။ အချိန်-	နေ့ လည် ၁း၃၀ မှ ၂း၃၀ အထိ။
နေရာ-	EDULINK ရုံး၊ Junction Square ၃ လွှာ (MK Fashion ဆိုင်အနားက ဓာတ်လှေကားဖြင့် တက်လာပါရန်)။ ဟောပြောမည့်သူ- Dr Erwin Oh... View details ⇨ Careers in Engineers Seminar
IELTS သင်တန်း ဘယ်မှာတက်ရင်ကောင်းမလဲလို့ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေပါသလား?
EDULINK မှ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် Certificate in English Language Teaching for Adults လက်မှတ်ရရှိထားပြီး နိုင်ငံတကာတွင် IELTS သင်ကြားရေးအတွေ့ အကြုံရှိသော Native Speaker က Free IELTS Workshop ကို (၁) နာရီခွဲ ကြာသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤ Workshop ကို တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် EDULINK မှ IELTS သင်ကြားပုံသင်ကြားနည်းများ၊... View details ⇨ Free IELTS Workshop For Speaking and Writing
“EDULINK မှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော Bangkok University ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ”
Bangkok University (BU) သည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အကြီးမားဆုံးနှင့် သက်တမ်းအရှည်ဆုံး Non-profit ပုဂ္ဂလိကကျောင်းဖြစ်သည်။ BU သည် ကျောင်းသားများကို creativity and entrepreneurship စွမ်းရှည်ရှိအောင်... View details ⇨ Free Bangkok University Education Seminar EVENT - facebook.com
Lucy Ahrmarn 06/21/2017 at 12:26 Thu Thu Swe Thein let's go
အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ဘယ်မှာတက်ရင်ကောင်းမလဲလို့ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေပါသလား?
EDULINK မှ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် Certificate in English Language Teaching for Adults လက်မှတ်ရရှိထားပြီး နိုင်ငံတကာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးအတွေ့ အကြုံရှိသော Native speaker Teacher က Free General English (4 Skills) Workshop for Elementary Level ကို (၁) နာရီကြာသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤ Workshop ကို တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် EDULINK မှ... View details ⇨ Free General English (4 skills) Workshop for Elementary
Cherry Khine 06/19/2017 at 09:00 How much about fees?
EDULINK မှ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် Certificate in English Language Teaching for Adults လက်မှတ်ရရှိထားပြီး နိုင်ငံတကာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးအတွေ့ အကြုံရှိသော Native speaker Teacher က Free General English (4 Skills) Workshop for Pre-Intermediate Level ကို (၁) နာရီကြာသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤ Workshop ကို တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် EDULINK... View details ⇨ Free General English (4 skills) Workshop for Pre-Intermediate
EDULINK မှ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် Certificate in English Language Teaching for Adults လက်မှတ်ရရှိထားပြီး နိုင်ငံတကာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးအတွေ့ အကြုံရှိသော Native speaker Teacher က Free General English (4 Skills) Workshop for Intermediate Level ကို (၁) နာရီကြာသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤ Workshop ကို တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် EDULINK မှ... View details ⇨ Free General English (4 skills) Workshop for Intermediate Level
Su Myat Myat Naing 06/19/2017 at 09:37 Nandar Soe Moe Oo
EDULINK မှ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် Certificate in English Language Teaching for Adults လက်မှတ်ရရှိထားပြီး နိုင်ငံတကာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးအတွေ့ အကြုံရှိသော Native speaker Teacher က Free General English (4 Skills) Workshop for Upper Intermediate Level ကို (၁) နာရီကြာသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤ Workshop ကို တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်... View details ⇨ Free English (4 Skills) Workshop for Upper-Intermediate Level
06/17/2017 at 07:51.
EDULINK မှ ဆယ်တန်းကျောင်းသားများအား ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့်ဇွန်လ၂၂ရက်နေ့မတိုင်ခင် Registerလုပ်သည့် ကျောင်းသားများကို Placement Test Free အပြင် သင်တန်းကြေး ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်ကိုလည်း Offer ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Promotion က ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့အထိပဲနော်!!!!!
Free Placement Test အတွက်အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားလို့
09 777 513000 ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး အခုပဲ Register လုပ်ကြရအောင် View details
Khine Myat Thu 06/19/2017 at 17:03 placement test အတွက် က fees ဘယ်လောက်သွင်းရမှာလဲရှင့် ။ ပြီးတော့ ဘဟ်အချိန် course တခုအသစ်စတာလေးလည်းပါ သိချင်ပါတယ်ရှင့် ။
Lydia Kyaw Kyaw 06/19/2017 at 05:13 Is this only for the people who have passed Matriculation exam?
Could you pls explain me about the classes via cb? Thanks.
Htet Htet Oo Wai 06/18/2017 at 06:47 Placement test ကဘာအတ္ဂက်ဖြေရမှာလဲရှင့်
“Australia နိုင်ငံ Griffith University မှ 2018 ပညာသင်နှစ်အတွက် Scholarships 50% အထိ EDULINK မှ လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း”
ဤ Scholarships လျှောက်ရန် စိတ်ဝင်စားသူများ အသေးစိတ်စုံစမ်းလိုပါက EDULINK ဖုန်း 09774855591 ကို ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ --------------------------------------------------------------------------------
Griffith Univeristy သည် ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းသားဦးရေ ၄၅၁ ... View details ⇨ View details
Kate Leeis 06/14/2017 Where is it
Eh Htunt 06/19/2017 at 14:57 could u pls provide more information how the process will be organized byEDULINK to ehhtunt1@gmail.com
or 097761777 66
Vice-Chancellor Professor Brian Schmidt AC said the latest rankings endorsed the role of ANU as Australia’s national university and asavalued resource for the nation. ANU ranked first in Australia, top 20 globally
Academic excellence and an enviable international outlook have helped UNSW climb four places to 45 in the QS World University Rankings. UNSW 1st in NSW, 45th in World
"" O levels, A levels, IB Diploma, IGCSE နှင့် ဆယ်တန်းဖြေဆိုထားသူများ၊ အောင်မြင်ထားသူများ အတွက် Scholarships လျှောက်ထားနိုင်မည့်အခွင့်အရေး ""
O levels, A levels, IB Diploma, IGCSE နှင့် ဆယ်တန်းဖြေဆိုထားသူများ၊ အောင်မြင်ထားသူများ UNSW မှ လာမည့် September 2017 နှင့် January 2018 intakes ကျောင်းသွားတက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသူများ AUD$ 10,000 တန်ဖိုးရှိ Foundation Studies Scholarships... View details ⇨ View details
ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီ ကျောင်းအပ်ပြီး 200,000 MMK Early Bird Discount ရယူလိုက်ပါ။ အသေးစိတ်သိလိုပါက 09777513000 နဲ့ 09421119895 သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါပြီနော်။ ဒီ offer ကို save လုပ်ပါ။ View details
354 likes - 23 comments
Hnin Myat Win 06/13/2017 I would like to attrend in weekend Staurday Afternoon and Sunday. If there have any class for me?
Rose Bella 06/06/2017 IELTS course ကောပါလား
Aung Khant Min 06/07/2017 funny thing is that the guy from this post is actuallyaMath Teacher 😂 not an English teacher . His name is Pietro bosell
Invité you all to our UNSW information session! Free UNSW information session
2017-18 ခုနှစ် UNSW Australia ကျောင်း တက်ရောက်လိုသူများအတွက် Regional Manager ဖြစ်တဲ့ Lau Najari က လာရောက်ဆွေးနွေးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်တန်းဖြေဆိုထားသူများ၊ IGCSE ဖြေဆိုထားသူများ ဘွဲ့ ရပြီးသူများ UNSW ကျောင်းကို စိတ်ဝင်စားသူများ လာတက်ရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ Why study at UNSW in Sydney, Australia ? -ranked top 49th in the 2016 QS World University Rankings
-a member of the prestigious... View details ⇨ Free UNSW information session
ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီ ကျောင်းအပ်ပြီး Early Bird Discount 200,000 MMK ရယူလိုက်ပါ။ အသေးစိတ်သိလိုပါက 09777513000 နဲ့ 09421119895 သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါပြီနော်.. View details
382 likes - 22 comments
Thant Zaw 06/04/2017 How long will you take the course and how much?
Aye Chan Myint Oo 06/08/20172lakhs discount for all courses? And when it start?
Rose Hannah Irenne 06/10/2017 if you can ; please explain me about your course and fees
ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီ ကျောင်းအပ်ပြီး Early Bird Discount 200,000 MMK ရယူလိုက်ပါ။ အသေးစိတ်သိလိုပါက 09777513000 နဲ့ 09421119895 သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါပြီနော်. View details
9736 likes - 13 comments
Tess Macher 06/12/2017 How about in July?
Wii I need to answer test exam to know my E skill?
Sai Söe Nge 05/31/2017 Pre Intermediate IELTS သင်တန်းရှိလား?
Su Pwint Hnin 05/27/2017 Khin Htwe Nge
ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီ ကျောင်းအပ်ပြီး Early Bird Discount 200,000 MMK ရယူလိုက်ပါ။ အသေးစိတ်သိလိုပါက 09777513000 နဲ့ 09421119895 သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါပြီနော်... View details
6104 likes - 14 comments
Paing Oo Zaw 06/04/2017 English4skills သင်တန်းကြေးလေး သိချင်ပါတယ်ဗျ
Thinzar Wutyee 05/27/2017 Call me back
Kyi Phyu Shin 06/13/2017 Eng 4skill သိချင်လို့ပါ